Izindaba - Shaya ucingo lomhlangano olwa nobhubhane! Kulungile kukhiqiza amasethi angama-200 wemishini yokukhiqiza imaski ngenyanga!
Kusukela u-Academician uZhong Nanshan ememezele ukutheleleka komuntu nge-coronavirus entsha ye-Wuhan ku-CCTV ngoJanuwari 20, 2020, ubhadane lwaseWuhan luthinte izinhliziyo zabantu baseChina abayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-1,4. Ngenkathi unake ubhadane, wonke umuntu useqalile ukunaka impilo nokuphepha kwabo kanye nemindeni yabo. NgoJanuwari 21, izifihla-buso zeHubei beziphelile, bese kuthi imaski iyashoda ezweni lonke, futhi beziphelile, okwenza izimbumbulu zigcwale emakethe.
Ngo-2019, ukukhishwa kwamaski alahlwayo eChina kwakuyizingcezu eziyizigidi eziyizinkulungwane ezingama-4.5 ngonyaka, ngesilinganiso samaski angu-3.2 ngomuntu ngamunye ngonyaka. Njengoba abantu baseChina bengenawo umkhuba wokusebenzisa izifihla-buso nsuku zonke, omaski abaningi bezwe lethu bathunyelwa kwamanye amazwe. Kusukela kwaqhamuka i-coronavirus entsha eWuhan, cishe wonke umuntu ongathenga amaski ugqoka amaski nsuku zonke. Lesi sehlakalo sizwakalise ukuvusa abantu futhi saqwashisa abantu ngokuzivikela. Ukusetshenziswa kwamaski alahlwayo nakho kuzoba isimo esijwayelekile. Esikhathini esizayo, isidingo samaski alahlwayo ezweni lami angama-51.1 billion, ukushoda okungama-46.6 billion kususelwa ekusetshenzisweni komuntu oyedwa ezinsukwini eziyi-10, okusho ukuthi isidingo sizokhula ngaphezu kwezikhathi eziyi-10 kulo nyaka nasesikhathini esizayo.
Umhlinzeki wemishini yezicubu e-Ok Technology-China, uphinde uvuselele irekhodi!
inkampani yokuqala yale mboni ihola phambili ngokunikela ngo-RMB 1 million ngokheshi.
inkampani yokuqala yocwaningo lomkhakha futhi ithuthukise umugqa wokukhiqizwa kwemaski ongalahlwa, imaski elahlwayo eyodwa-isiqeshana, isikhwama esigoqayo, ibhokisi kanye nomugqa wokukhiqiza wokupakisha.
Ukuphendula ubizo lweqembu kanye nohulumeni, abantu baka-OK basebenze ubusuku nemini belwa nobhadane olusha lwe-coronavirus futhi ekugcineni balibona ikhono lokukhiqiza amasethi angama-200 emishini yokukhiqiza imaski ngenyanga ukuhlangabezana nesidingo esiqinile semakethe.